डा. केसीको अनसन तोडियो; काठमाडौं १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने सहित ९ बुँदे सहमाति – जनस्वास्थ्य खबर
डा. केसीको अनसन तोडियो; काठमाडौं १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने सहित ९ बुँदे सहमाति
१० साउन, काठमाडौं । सरकार र आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी बिच सबै माग पुरा गर्ने गरी नौं बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भए संगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।
नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ र प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर डा केसीकाे अनसन तोडाएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकारले विभिन्न बुँदा संसोधन गर्न लागे संगै डा. केसी अनसन बसेका थिए ।
बिहिबार दिउसो सहमति नजिक पुगेको वार्ता काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने विषयमा सहमति हुन नसके पछि रोकिएको थियो । तर, राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा वार्ता भएर अन्तत सहमति भएको हो ।
डा केसीसंग भएको ९ बुँदे सहमति को पूर्ण पाठ